Sunday December 01, 2019 - 20:13:08 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Mid kamida maxaabiistii reergalbeedka ee dhowaan Xarakada Jihaadiga Taliban ay sii daysay ayaa ka sheekeeye qaabkii loola tacaamulay isaga iyo saaxibkiis sedaxdii sanadoo ee ay ku jireen gacanta mujaahidiinta.
Timothy Wicks oo macallin ka ahaa Jaamacadda American University of Afghanistan faraceeda magaalada Kaabuul ayaa gacanta Taliban ku dhacay sanaddii 2016 isaga iyo saaxibkiis oo American ah.
Markii lasoo daayay ayuu saxaafadda kula hadlay magaalada Sydney ee wadanka Australia wuxuuna ka sheekeeyay qaabkii ay Taliban ula tacaamushay isaga iyo saaxibkiis, wuxuu sheegay in muddo sedax sanadood ah ay ku sugnaayeen wax uu ugu yeeray Jaxiimada adduunka oo uu ula jeedo nolosha maxbuusnimada.
Timothy Wicks oo 50 sana jir ah ayaa soo hadal qaaday qaabkii noloshooda wuxuu aad u ammaanay Mujaahidiinta Talibaan oo uu sheegay in ay si wanaagsan ula tacaamuleen ayna yihiin dad ixtiraama maxaabiista.
"waxay ahaayeen kuwa aad unaxariis badan.. waxay ahaayeen ashkhaas wanaagsan oo si fiican noola macaamilay" sidaas waxaa yiri Timothy Wicks.
Ninkan Australian-ka ah wuxuu caddeeyay in isaga iyo saaxibkiis Kevin King ay ku noolaayeen godad mugdi ah islamarkaana lagu hayay xabsiyo kuyaalla wadamada Afghanistan iyo Pakistan, wuxuu carrabaabay in ciidamada Mareykanka ay ku fashilmeen isku dayo dhowr ah oo ay ku doonayeen in ay kusoo fakiyaan.
Heshiis maxaabiis isweydaarsi ah oo Mareykanka iyo Taliban dhaxmaray 20,November 2019 ayaa lagusii daayay labadaan maxbuus ee u kala dhashay wadamada Mareykanka iyo Australia.